राईलाई तरुण दल साथै खड्का र शर्मालाई नेविसंघ नेतृत्वमा ल्याउन प्रस्ताव
चुनाव चिन्हमा हरियो मसी प्रयोग हुँदा तर्सियो एमाले !
चुनावी अभियानमा कांग्रेस : जनताको घर घरमा पुग्ने लक्ष्य
नेपाली कांग्रेस पार्टीले ‘घर–घर जाऔँ, कांग्रेस जिताऔँ’ अभियान सुरु गर्ने भएको छ । कांग्रेसले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरेर एक महिने ‘घर–घर जाऔँ, कांग्रेस जिताऔँ’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो ।
नेविसंघ नयाँ नेतृत्वका लागि को को ?
नेपाली कांग्रेसले आफ्ना भ्रातृ संगठनहरुको नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कांग्रेसले म्याद सकिएका १० भ्रातृ संगठनमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारी थालेको हो ।
साना कम्युनिष्ट घटकले एमसीसी खारेज गराउन सक्लान ?
अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)संसदबाट पारित भएपछि साना राजनीतिक दलहरु आन्दोलित छन् । प्रमुख दलका केही नेताहरु पनि पार्टीको निर्णयप्रति रुष्ट छन् । माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ र एमालेका भीम रावल खुल्ला रुपमै एमसीसीको विरुद्धमा छन् ।
तरुण दलमा नयाँ नेतृत्वको तयारी, गुरुङ र राई बलिया दाबेदार
नेपाली कांग्रेसले म्याद सकिएका १० भ्रातृ संगठनमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारी थालेको छ । फागुन मसान्तभित्र तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले तदर्थ समिति गठन गर्ने तयारीमा जुटेको हो ।"""
एमसीसी अनुमोदनपछि प्रचण्डले गरे आफ्नै बचाउ, एमालेप्रति आक्रोश
एमसीसीबारे दलहरुसँग सहमति जुटाउन कांग्रेस असफल !